Dubai Real Estate - Dubai Real Estate avy amin'ny Provident Property | Properties
Dubai's real estate dia niondrika tamim-boninahitra avy amin'ny fihenan'ny ara-toekarena 2008 ary hatramin'izay dia tafarina tamin'ny fiaramanidina haingana. Raha mbola mitodika amin'ny vondrona sasany noho ny fihenan'ny vidin'ny vidiny ny tsenam-barotra amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao tahaka an'i Eoropa, Etazonia, Rosia, Shina, India ary Brezila, dia mihamitombo hatrany ny sehatry ny faritra. Raha ny marina, i Dubai dia eo an-tampon'ilay lisitry ny mpampiasa vola maneran-tany.
Ny fangatahana trano fonenana eto, na ara-barotra na trano fonenana, dia mihodina. Anisan'ireo antony nametrahana ny làlan-dàlana ho an'ity fironana ity ny lalàna vaovao napetraky ny governemanta ho an'ny mpampiasa vola.
The trano Ireo trano any Dubai, na ho an'ny varotra na ny hofany, dia ahitana trano fonenana mahavariana, trano fonenana sy tranobe. Mandritra izany fotoana izany, ny trano fananan-tany ara-barotra any amin'ny faritra dia rafitra, toeram-piasana, toeram-piasana, trano fonenana. Nandritra ny taona maro, ireo trano ireo dia nahasarika mpampiasa vola maro avy any ampitan-dranomasina.
Ny tsenan'ny trano fanatobiana any Dubai dia toerana iray ihany koa ho an'ny trano fialan-tsasatra toy ny trano fandraisam-bahiny, toeram-ponenana, toeram-pitsangatsanganana, trano fonenana ary trano fonenana, izay atolotra ho an'ny fandefasana fohy sy maharitra. Miaraka amin'ny karazana fisakafoana marobe azo alaina ho an'ny trano fialamboly sy mpizaha tany, Dubai no hany tanàna eto amin'izao tontolo izao izay tranon'ny hotely 7-kintana miaraka amin'ny vondrona 5-, 4-, ary 3-kintana.
Miaraka amin'ny fipoahana tsy misy fiafaràn'i Dubai eo anelanelan'ny krizy ara-bola manerantany amin'ny 2008, dia mora ny manaparitaka ny fitomboany tsy tapaka amin'ny taona ho avy. Ny mpampanofa ambony indrindra eran'izao tontolo izao dia mihevitra ny faritra ho toerana azo antoka sy azo antoka ho an'ny fampiasam-bola ara-nofo ankehitriny sy ireo taona ho avy.